Xiriiriyaha Klear: Suuqgeynta Saameynta CRM iyo Raadinta Ololaha | Martech Zone
Iskuxirka Klear: Suuqgeynta Suuqgeynta CRM iyo Raadinta Ololaha
Sabtida, Maarso 23, 2019 Sabtida, Maarso 23, 2019 Douglas Karr
Klear, tiknoolajiyad suuq geyn saamayn leh, ayaa lagu daray Isku xidhka Klear, xal dhammaystiran oo loogu talagalay maareynta ololeyaasha saamaynta. Horumar muhiim u ah suuq-geynta saamaynta-sumadaha iyo saamileyaasha labadaba. Klear ayaa ka jawaabaya su'aasha:
Sideed ula socotaa wax walba?
Isku xidho hagaajinta isgaarsiinta udhaxeysa sumadaha iyo saamileyaasha adoo adeegsanaya otomaatigga geeddi-socodka buug-gacmeedka inta lagu jiro wareegga nolosha ee barnaamijka wax-ku-oolka oo leh adeeg wadahadal isku-dhafan iyo awood u lahaanshaha ka wada-shaqeynta waxyaabaha ku jira, iyo la socoshada lacagaha iyo Sheekooyinka Instagram.
Isku xidhka Klear waxay awood u siineysaa sumadaha inay sare u qaadaan xiriirka saameynta leh iyo guusha ololaha, oo ay ku jirto awoodda:
Dusha sare: Adeegso tusaalooyin kooban oo la beddeli karo si aad u siiso saamayntaada tilmaamaha lagama maarmaanka u ah socodsiinta ololahaaga
Iswaafajinta Mashruuca: Toos u xiriirinta adeeg wada hadal isku dhafan si aad xiriir joogto ah ula yeelato saamileyaasha, ula wadaagto una oggolaato fikradaha hal-abuurka ah, iyo dabagalka ololahaagii ugu dambeeyay
Heshiiska: U dir oo saxiix qandaraasyada dhib la'aan
Raadinta Lacag bixinta: Isugeynta lacagaha iyo xawaaladaha tooska ah
Sheekooyinka Raad-raac: Ku casuumi kuwa wax ku oolka ah si ay u xaqiijiyaan astaanta Instagram ee awood u lahaanshaha kormeerka sheekooyinka IG
Maareynta howlaha maalinlaha ah ee ololaha saameynta waxay caqabad ku noqon kartaa suuqleyda, gaar ahaan marka sumadaha ay leeyihiin ololeyaal badan oo isku mar wada socda. Waxaan u abuurnay Klear Connect si aan u toosino nidaamka si ay suuqyadu ugu helaan dhammaan baahiyahooda ololaha hal meel, taas oo u oggolaanaysa qof walba inuu maareeyo hawsha oo dhan bilow ilaa dhammaad toos ah oo ka socota barxadda Klear. ”
Eytan Avigdor, Maamulaha Klear iyo aasaasaha
Xalka Klear waa isku xirnaanta magacyada iyo saamileyaasha; Klear Connect waxaa loo sameeyay si wax looga qabto baahiyaha CRM ee isticmaalayaasha iyadoo la suurta gelinayo isgaarsiin hufan. Barmaamijka suuqgeynta wax-ku-oolka ayaa hadda awood u siinaya ganacsiyada inay helaan, maareeyaan, kormeeraan, oo ay ka warbixiyaan ka-qaybgalka suuq-geynta saamaynta ay ku leeyihiin hal madal.
Isku xidhka waxay ku siisaa noocyo tusaalooyin kooban oo tilmaamaha caanka ah, waxyaabaha la soo gudbiyo, iyo waxyaabaha laga filayo si labada dhinacba ay himilooyinka u waafajiyaan. Dhammaan agabyada waxaa si toos ah loola wadaagi karaa saamileyaasha adoo adeegsanaya adeegga wada hadalka ee isku-dhafan ee 'Klear Connect', halka horumarka lala socon karo ogeysiisyada waqtiga-dhabta ah.
Intaa waxaa sii dheer, magacyadu waxay ku martiqaadi karaan kuwa wax saameeya inay xaqiijiyaan koontadooda Instagram, iyagoo u oggolaanaya la socoshada Sheekooyinka Instagram. Sidaa darteed, fududeynta wareegga ololaha maaraynta saamaynta.
Ku saabsan Klear
Waxaa la aasaasay 2011, Klear waa xalka suuq geynta saamaynta leh oo dhameystiran, oo siineysa suuqleyda awood ay ku dhisaan, ku cabirtaan oo ay ku cabiraan barnaamijyada saameynta leh bilow ilaa dhamaad Iyada oo leh xogta ugu ballaaran ee suuqa, Klear waxaa adduunka oo dhan u adeegsada shirkadaha ugu sarreeya ee Fortune 500, iyo sidoo kale hoggaamiyeyaasha suuqgeynta iyo xiriirka bulshada. Iyada oo awood loo leeyahay in lagu soo dhawaado saamileyaasha yar-yar iyo in la ogaado kuwa raacsan been abuurka, Klear's abaalmarinta abaalmarinta waa qalab istiraatiijiyadeed dhammaad illaa dhammaad ah oo awood u siinaya suuqleyda inay bilaabaan ololeyaal saameyn leh oo guuleysta. Hadda Klear wuxuu ka shaqeeyaa in ka badan 30 shaqaale adduunka oo dhan, iyo xafiisyo ku yaal Tel Aviv, New York, Chicago, iyo London.
Jadwalka Dembi Klear
Tags: saamayn ku yeelashada crmcadeeya